Homeराष्ट्रिय खबरसीमा ब,चाउँदा सरकार ढ ले ढ,लोस् – भारतले मि,चेकाे नेपाली भूमि फि,र्ता गराएरै छाड्छु – प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार ढ,ल्ने अवस्था आए पनि भारतले क,ब्जा गरेको नेपाली भूमि फिर्ता गराएरै छाड्ने बताएका छन् । भर्खरै आफ्नो एक अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकबाट भारतीय सेना ह,टाउने र नेपाली भूमि फिर्ता गरिने तथा यस्तोमा सरकार ढाले पनि आफू तयार रहेको स्पष्ट पारे ।
‘सरकार गि रे गि,र्छ, कतिपय अवस्थामा गि,र्न पनि तयार हुनुपर्छ । अघिल्लो पटक म पनि गि,रेको हो । सरकारबाट मलाई पनि ढा,लिएको हो’, उनले भने । ना,काबन्दीको वि,रोध, उत्तरबाट पारवाहन सन्धि, नाका खोलेर नेपाललाई नयाँ उचाइमा लग्दा आफ्नो पहिलो कार्यकालको सरकार ढ,लेको बताउँदै ओलीले राष्ट्रिय हित, राष्ट्रको सीमाको मूल्यमा म सरकारमा रहन्छु कि रहन्न भन्ने कुराले कुनै अर्थ नराख्ने बताए ।
उनले प्रश्न गरेः मैले सीमा जो,गाउनुपर्छ कि सरकारमा रहनुपर्छ? सीमा जोगाउनका लागि भक्ति थापा तो,पको भुमरीमा उ,डेका होइनन् ? बलभद्रहरु पानी खान नपाएर पनि ल,डेका होइनन् ? अमर सिंह थापा त,रवार लिएर मैदानमा उ,त्रिएका होइनन् ? त्यसकारण मेरो पद, ज्या,न होइन, राष्ट्र राष्ट्र हो, राष्ट्रको भूमि राष्ट्रको भूमि हो ।
ओलीले थपे, ‘अहिले कुरा उठेको यहीँ भावनाका साथ काम गर्न सक्छ भनेर होला । पदको वास्ता नगर्ने, पदभन्दा माथि उठ्ने प्रधानमन्त्री छ भनेरै होला ।’ कालापानी लगायत सीमा वि,वादमा नरेन्द्र मोदीसँग आफूले खु,लस्त गर्नसक्ने स्पष्ट पार्दै ओलीले तल्लो तहबाट पनि स,माधान हुनसक्ने बताए ।
हामीसँग प्रमाण, नक्सा, जनगणना गरेका व्यक्ति सबै भएकाले यो विषयमा धेरै अ,फ्ठेरो मा,न्न नपर्ने ओलीको भनाई छ । तथ्य र प्र,माणबाट भारतीय सेना ह,टाउने र भूमि फिर्ता गर्ने ओलीको दृ,ढता छ ।
सु’त्केरीको मृ’त्यु भएपछि धुलिखेल अ’स्पतालमा स’तर्कता
viagra vs tadalafil – liquid tadalafil tadalafil liquid
finasteride before and after reddit – cvs propecia price finasteride generic
affordable dissertation writing – http://boessay.com/ eassy help
Nydkgb – ivermectin pill cost Jsfrpt unsujt